Recipe for Mini Pizza nge Zucchini
I-pizza encinane nge-zucchini
I-mini pizza nge ham kunye ne-zucchini Ndifuna ukwabelana iresiphi yam umbhali wam pizzas mini kunye ne-zucchini. Imbali yokubonakala kwayo ilandelayo. Ngesithuba sama-90, ngexesha leengxaki kunye nokungahambi kwemali, i-zucchini ixesha elide libhekiselele kwininzi yentsapho. Baye banondliwa kakhulu kule ngxaki kangangokuba ngoku, intsapho yam ingafuni ukuva malunga nabo, nangona imifuno ngokwayo iphawulekayo. Ndandicinga ukuba kuya kuba njani ukupheka nge-zucchini, kangangokuthi abazange babangele imibhobho ebomvu kunye nokubukeka kakubi. Kwaye kwavela kum - kufuneka ubenze ngendlela ye-pizza. Ukususela ngoko, i-mini-pizzas ne-zucchini ndipheka rhoqo, kwaye wonke umntu uyavuya. I-pizza yincwadana enomdla kakhulu. Ngexesha lokuvuthwa kwe-zucchini ungathatha ama-specimens angaphezulu, kule recipe zixesha elifanelekileyo, ngokuqinisekileyo, ngamanye amaxesha ubukhulu be-zucchini bukhulu kunokuba bukhulu.
I-Sugar 0.5 tsp.
Utamatisi we Cherry 4 ii-pcs.
Inyathelo 1 Lungiselela izithako esizidingayo: inhlama elungiselelwe ngaphambili, i-zucchini, i-Parmesan ushizi, i-tomato enkulu kunye ne-cherry, isincinane encinci ye-pepper e-sweet, i-ham, ioli yeoli, i-tomato sauce kunye nemifino. I-parsley eqhelekileyo kunye neetyetyilike zifanelekile.
Inyathelo 2 I-Zucchini ihlanjululwe, yinqumle kwiibonda kunye nobukhulu be-12-13 mm, yinqumle ingundoqo kunye nembewu, ujike kwiindandatho.
Inyathelo lesi-3 Gcoba i-zucchini ngetyuwa uze uyiphonkcele emacongeni, mawubambe kwaye uvumele ijusi iphume.
Inyathelo 4 Yinqumle ipepper ibe ngamacwecwe amancinci.
Isinyathelo 5 Sika inyama ebilisiwe kwiibhubhu ezincinci.
Inyathelo 6 Dweba utamatisi omkhulu kunye neetamatisi ezinomsila zibe ziincinci ezincinci.
Isinyathelo 7 I-parmesan grate kunye neentsimbi ezimnandi.
Isinyathelo 8 Kusuka kwintlama ukwenza iibhola ubukhulu bomnatha.
Isinyathelo 9 Gcwalisa iibhola zibe ngamaqebelengwane amancinci amancinci, u-1 cm ngaphezu kobunzima beesondo ze-zucchini, zibeke kwiphepha lokubhaka eligutywe ngamaphepha okubhaka okanye ngeengubo ezingenanto. Gcoba amaqebelengwane ngeoli yeoli.
Inyathelo 10 Beka izitya ze-zucchini kwiintlanzi uze uzicinezele ngokucacileyo ukusuka phezulu, uzigubungele inhlama.
Inyathelo 11 Gqubuthela i-sauce ye-tomato ngendandatho ye-zucchini.
Isinyathelo 12 Ngaphakathi kwendandatho kunye nomjikelezo walo kwaye ubeke umgca wepepper ngaphantsi, uzalise ngamacube edibeneyo ukuze isalathisi sigcwaliswe ngokupheleleyo.
Inyathelo 13 Vala i-ham ngekomityi yetamatato.
Inyathelo 14 Beka iqatha letatoli inxalenye yeParmesan kunye nephezulu "yeqhosha" le-cherry. Beka kwi-ovini, uphelelwe kwi-220 ° C malunga nemizuzu eyi-15-20.
Inyathelo 15 Thatha i-pizza encane eyilungisiweyo, thabathe ephepha. Ukuhlobisa i-pizza nge-parsley okanye i-arugula, kuxhomekeke kubukho bendalo okanye ukukhethwa kwintlobo - unokuyonwabela imnandi!
Iitamatati ezixutywe kunye namazambane
I-pizza kunye neetamatati, isobho kunye noshizi
I-flet fillet kwi-tomato sauce
I-Pizza kunye nobhontshisi obuluhlaza kunye neha
Indlela yokulungiselela umtshato - iingcebiso zabaqeqeshi
Indlela yokugcina amehlo akho ekhaya?
I-coat oatmeal neebhanana